Saynisyahano British ah oo ku dhow in ay gaadhaan daweeyn kama dambays ah oo ah cudurka HIV/AIDS - Horn Future
Saynisyahano British ah oo ku dhow in ay gaadhaan daweeyn kama dambays ah oo ah cudurka HIV/AIDS
London(Sunday Times)-Saynisyahano iyo dhakhaatiir British ah oo ka kooban 5 jaamacadood oo ah kuwa haybadda leh ee dalka Britain ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay gaadhaan dawo kama dambays ah oo la siiyo dadka qaba cudurka HIV (AIDS).
Nin British ah oo da’diisu lagu sheegay 44- jir ayaa u dhow in uu noqdo qofkii ugu horeeyay ee dunida ee ka bogsada cudurkan oo isticmaalaya dawo cusub oo loogu talagalay in lagu baabi’iyo (virus) ka cudurkan HIV/AIDS.
Ninkan waa ayaa ah kii ugu horayeeyay 50 qof oo kamid ah dadka sugaya dhamaystirka muddada daweeynta ee tijaabadan taas oo ah daweeyntii ugu horeeysay ee raad-raac ku haysa virus ka HIV oo baabbi’inaysa qayb kasta oo jidhka ah oo ay kamid ay yihiin unugyadooda hurda ama qarsoodiga ah ee iska fogaanaya daweeyntan imika,iyada oo haddii tijaabadani ay guuleysto ay siin doonto rajada tirtirid kama danbeyn ah ee cudurkan.
Tijaabadii ugu horeesay ayaa muujisey in virus ku uunan ku jirin dhiigga ninkan,laakiin waxa lagama maar maan ah in la sugo dhowr bilood ka hor inta aanan la xaqiijinin in daweeyntani ay tirtirtay cudurkan gabi ahaan iyo in kale.
Marka tan loo eego,agaasimaha guud ee Machadka Qaranka ee Xafiiska Cilmi-baadhista Caafimaadka ee kaabayaasha cilmiga caafimaad Mark Samuel, ayaa sheegay in tani ay tahay midka mid ah isku day dhab ah si loogu helo AIDS ka dawo dhamaystiran,waxana uu sheegay in tani ay tahay caqabad weyn, walina ay ku jiraan maalmahii ugu horeeyay,laakiinse buu yidhi waxa laga gaadhay haraw-umar yaab ah.
Dhiniciisa,bukaankan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada magaalada London oo la hadlay wargeyska Sunday Times ayaa sheegay in baadhitaankii ugu dambeeyay ee dhiiggiisa laga qaaday 2 todobaad ka hor,uunan ku jirin virus kani dhiigiisa.
Daweeyntan cusub ayaa ah natiijo iskaashi oo aanan hore loo arag oo dhexmartay jaamacadaha Oxford ,Cambridge, Imperial College London, University College London iyo Kings College London University, oo taageero ka helaya Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee Qaranka ee( NHS) ee Britain.
« Muuqaal qaadihii doonyihii qaraqmay oo shabakada CNN uga sheekeeyay masiibada murugada leh ee tahriibayaasha	» Booliiska Fransiiska oo sheegay in qori lagu weerar xarun ay deggen yihiin dad qaxooti ah koonfurta dalka